Jiro jiro an-trano: toetra sy fomba fanaovana azy | Fanavaozana maintso
Jiro mandeha an-trano namboarina
Raha te hanana zaridaina misy fomba fampangatsiahana tsara ianao ary ekolojika izany, tsara raha mianatra ny fomba fanabeazana anao. jiro avy any an-trano. Izy io dia karazan-jiro miorina amin'ny angovo azo havaozina izay azo haingoina tanteraka amin'ny fombanao ary mampifanaraka tsara an'ireo karazana fitambarana.
Amin'ity lahatsoratra ity dia holazainay aminao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny fanamboarana jiro avy amin'ny masoandro sy izay tombony atolotray azy.
1 Inona ilay jiro mandeha an-trano namboarina
2 Ahoana ny fanamboarana ny jiro amin'ny tananao
2.1 -mitoto vary
2.2 Ny fanangonana ny jiro avy amin'ny masoandro namboarina
Inona ilay jiro mandeha an-trano namboarina
Ilaina amin'ny fanaingoana ny jiro amin'ireo zaridaina. Indrindra amin'ny fotoam-pahavaratra raha misy ny fijanonana mandritra ny alina sy ny sakafom-pianakaviana. Fantatra fa ny endrika maoderina indrindra dia mitaky fitambarana loko izay mifanaraka amin'ny karazana voninkazo sy ny lokon'ny rindrina. Amin'izany dia tsy vitan'ny hoe mifantoka amin'ny jiro ihany isika, fa mampitombo ny ravaky ny zaridainantsika ary tsy mandoto.
Jiro mandeha an-trano namboarina miasa amin'ny herin'ny masoandro mandritra ny andro ary manana angovo ampy hanazavana amin'ny alina. Azo vidiana any amin'ny magazay izany fa raha manao azy isika dia afaka manana adaptation tsara kokoa amin'ireo singa haingon-trano isan-karazany ao an-trano. Hampianatra ireo dingana samihafa tokony ho fantatrao hianaranao ny fomba fanamboarana jiro mpamokatra herinaratra anao izahay.
Ahoana ny fanamboarana ny jiro amin'ny tananao
Raha manam-potoana kely ianao hamelabelarana izany, Tsy mila 15 minitra fotsiny ianao mba hanaovana jiro mandeha amin'ny masoandro vita an-trano. Amin'ny ankapobeny, ny jiro mandeha amin'ny masoandro mahazatra dia ampiasaina amin'ny any ivelany. Ireo siny ampiasaina dia ireo izay matetika ampiasaina amin'ny fanendahana. Amin'izany no hanampian'izy ireo hampiasa indray ireo siny fihinanam-bolo izay tsy ilaina intsony. Azonao atao ny mampiasa karazana siny rehetra, fa zava-dehibe ny fandehanan'ny rivotra, ny fiparitahana ary manana habe mitovy amin'ny an'ny tontonana masoandro.
Ireto ny fitaovana ilaina hanaovana ny jiro:
Tavoara 4 misy sarony
Jiro miisa 4
Tifitra fitotoana fitaratra vera 1
Screwsriver kely Phillips (cruciform)
Tape adhesive ho an'ny famonosana
Andao hojerentsika hoe inona ireo dingana ilaina:
Tsara kokoa ny manisy ny fanala amin'ny ampahany dia ny siny mba hanamorana ny fizotrany. Tsy soso-kevitra amin'ny fonony izy io satria tsy maintsy tazonina mangarahara mba hidiran'ny tara-masoandro ary hiasa tsara ny jiro. Tsy maintsy apetakao ny tsifotra totoina amin'ny halavirana manodidina ny 15 santimetatra eo ho eo mba hiasa tsara. Tsy maintsy ampiasaina miadana izy io satria raha atao tsy an-kijanona izy io dia afaka miforona. Ny endriny manokana dia azo atao, ny ampahany mangatsiaka ary ny mangarahara. Alohan'ny hanaovana an'ity famolavolana ity dia tokony hampiasa kasety fametahana ianao ary diovina amin'ny alikaola ny tampon-tany mba hahafahan'ilay mitoto mikikitra kokoa.
Raha vantany vao maina dia nesorina ilay kasety ary hanana ny maodely tokana anao ianao. Raha hamafana ny fanilo dia ho hita fa mampiasa visy manodina hanala ny vatan'ny aliminioma. Eo afovoany ny tariby ka raha mbola tsy atosikao lavitra be ianao dia tsy hanimba zavatra. Rehefa mivoaka ianao izay fonosan'ny bika dia afaka mahita stains maromaro hiseho eo amin'ny lakaoly ianao. Ireo tasy ireo dia karazan-tsolika izay ampiasaina hanaronana ny lohan'ny visy. Tsy mila manala ireo tasy ireo ianao. fotsiny tsy maintsy apetrakao ny visy manodina mba hanala ireo visy. Raha vantany vao esorinao ny ampahany elektronika amin'ny endriny aliminioma dia ilaina ny mampiasa ny visy manodin-tany hanaparitahana azy.
Ny fanangonana ny jiro avy amin'ny masoandro namboarina
Mila manapaka ny vatan'ny aliminioma ianao mba hitazonana ireo zavatra sisa tsy simba. Misaotra an'io fa tsy maintsy manamboatra tariby rehetra izahay. Tsy maintsy mampiasa hety isika hanamboarana ny voapaika miaraka amin'ny plastika orona. Amin'ireto pliers ireto dia mikarakara ny fanondrahana ny vy hametrahana tsara ny zavatra.
Rehefa vitanao ny manaisotra ny trano dia hahita boaty plastika ampiasaina hitehirizana ny bateria ianao. Ho hitanao koa a birao boribory kely, tariby LED, panneaux solaire ary sensor misy jiro. Izy io no sensor sensor izay ampiarahiny ary mivoaka tampoka tampoka izy io. Ny tontonana amin'ny masoandro dia tokony handeha amin'ny alàlan'ny fametahana saika tanteraka ny lavaka sy ny saron'ny tavoara. Mba hahazoana antoka fa napetraka tsara ny zava-drehetra dia tsy maintsy ampidirintsika ny batterie sy ny circuit, hiarovana azy amin'ny tape adhesive na silicone. Amin'izany fomba izany no ahafahantsika mampiditra azy amin'ny tsindry ampy hitazomana azy.
Azonao atao ny manatsara ny fanaingoana ny jiro amin'ny tananao amin'ny alàlan'ny fampiasana sivana maivana mba hisy loko. Ohatra, afaka mampiasa ny sivana marika tavoahangy fiainana isika. Raha tsy mibontsina be ilay tavoahangy dia tsy hampihena ny hazavana izy io. Azonao atao ny manapaka efamira eo ho eo 2.5 sm ny marika ary apetaho amin'ny kasety adhesive. Amin'izany fomba izany no ahafahantsika mametraka loko isan-karazany mba hampitomboana ny fisarika ny jiron'ny masoandro ao an-trano. Zava-dehibe ny hahazoana antoka fa mifatotra ny sisiny mba tsy hivoaka ny hazavana fotsy.
Mba hahatakarana tsara ny fiasan'ny jiro amin'ny masoandro dia hojerentsika hoe inona ny rafitrao. Misy ny sasany izay manana rafitra fitaratra miatrika ny masoandro. Ity rafitra ity dia tompon'andraikitra amin'ny fisamborana sy ny fifantohana ny taratry ny masoandro ary taratra azy ireo mivantana mankany amin'ilay faritra hazavaina.
Matetika izy ireo no be mpampiasa indrindra amin'ny zaridaina sy ny patio anatiny. Eo an-tampony dia misy fitaratra izay miandraikitra ny fitaratra sy ny fitarihana ny jiro mankany amin'ny vala. Mety misy fitaratra hafa koa ao anatiny, miankina amin'ny filàna. Misy jiro mandeha amin'ny masoandro izay manana rafitra somary sarotra kokoa mifangaro amin'ny optika fibre. Izy ireo dia manana solomaso izay misambotra ny taratry ny masoandro. Ireo jiro ireo dia amboarina hanazava ny faritra hatramin'ny 150 metatra ary rafitra mahomby kokoa. Na izany aza, ny vidin'ny fametrahana azy dia tsy avo kokoa. Ho an'izany rehetra izany dia tsara kokoa ny manazava ny jiron'ny herinao satria izy io no maodely safidinao ary hifanaraka tsara kokoa.
Manantena aho fa miaraka amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny jiron'ny masoandro namboarina ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Mitsitsy angovo » Trano maintso » Jiro mandeha an-trano namboarina
Manisa hery elektrika